Ahoana ny fanatsarana ny haavon'ny asa soratanao?
Posted by Tranquillus | Mar 24, 2021 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Ny fanoratana any am-piasana dia tsy mora araka ny noeritreretinao azy. Eny tokoa, tsy toy ny manoratra amin'ny namana akaiky na amin'ny media sosialy izany. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fiezahana hanatsara ny asa soratanao isan'andro. Raha ny marina dia mitaky ny fahombiazan'ny asa an-tsoratra ny tontolon'ny asa. Satria miankina amin'izany ny lazan'ny orinasa iasanao. Jereo ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba hanatsarana ny fehezanteny an-tsoratra any am-piasana.
Adinoy ny sarin-kabary
Mba hanatsarana ny fehezanteny an-tsoratra iray miasa dia atombohy amin'ny fanesorana ireo sarin-kabary satria tsy ao anatin'ny lahatsoratra an-tsoratra iray ianao. Noho izany, tsy mila fanoharana, fanoharana, fanoharana, sns ianao.
Rehefa atahoranao ny fampiasana tarehimarika kabary amin'ny asa soratanao any am-piasana, dia mety hitranga ianao eo imason'ny mpamaky anao. Eny tokoa, ity iray ity dia hihevitra fa nijanona ianao tamin'ny vanim-potoana nahalalan'i jargon ny fomba hanomezana fanajana sy tahotra an'ireo mpiara-miasa.
Apetraho eo am-piandohan'ny fehezanteny ny fampahalalana tena ilaina
Mba hanatsarana ny fehezanteny amin'ny asa soratanao, diniho ny fametrahana ny fampahalalana amin'ny fiandohan'ny fehezanteny. Izy io dia ho fomba iray hanovana ny fombanao sy hanasaranao ny tenanao amin'ny lohahevitra mahazatra + matoanteny + famenony.
Mba hanaovana izany, safidy maromaro no azonao atao:
Ny fampiasana ny participle taloha ho toy ny adjectif : ohatra, liana amin'ny tolotrao dia hifandray indray isika amin'ny herinandro ambony.
Ny famenon-javatra napetraka tany am-piandohana : le 16 février dernier, nous vous avons envoyé un mail…
HAMAKY Hatsarao ny tsipelina nataonao amin'ny horonan-tsary
Ny fehezanteny amin'ny infinitive : Ho fanarahana ny resadresaka nifanaovana taminay, dia manambara ny fanamarinana ny fangatahana nataonao ...
Fampiasana ny endrika tsy miankina manokana
Ny fanatsarana ny asa soratanao any am-piasana koa dia midika hoe mieritreritra ny fampiasana rijan-teny tsy miankina amin'ny tena. Avy eo dia ho fanontaniana fanombohana amin'ny "he" izay tsy manondro na iza na iza. Ohatra, nifanarahana fa haverinay hifandray indray ilay mpamatsy ao anatin'ny herinandro, ilaina ny mamerina ny fomba fiasa sns.
Soloy verbe boilerplate
Ataovy izay hampanan-karena anao koa ny asa soratanao amin'ny alàlan'ny fandraràna ireo andalan-tsoratra masina toa ny "hananana", "ho", "hanao" ary "hiteny". Raha ny tena izy dia ireo verbe ireo izay tsy manankarena ny fanoratanao ary manery anao hampiasa teny hafa mba hahalavorary kokoa ilay fehezanteny.
Ka soloina verba ny verba boilerplate miaraka amin'ny dikany mazava kokoa. Hahita teny mitovy hevitra maro ianao izay hahafahanao manoratra amin'ny marimarina kokoa.
Teny marina fa tsy periphrases
Periphrasis dia ilazana ny fampiasana famaritana na andian-teny lava fa tsy teny iray izay afaka mamintina azy rehetra. Ohatra, ny sasany mampiasa ny teny hoe "izay mahay mamaky teny" fa tsy hoe "mpamaky", "efa nampahatsiahy anao…" fa tsy "nampandrenesina anao…".
Rehefa lava loatra ny fehezanteny dia mety ho very haingana ilay mahazo azy. Etsy ankilany, ny fampiasana ny teny fohy sy mazava dia hanamora ny famakiana.
Ahoana ny fanatsarana ny haavon'ny asa soratanao? 25 martsa 2021Tranquillus
Teo alohaAsa atao ampahany: fandrakofana 100% any amin'ireo sampana voakasiky ny fameperana ara-pahasalamana
manarakaManan-jo hampiasa geolocation hifehezana ny fotoana fiasan'ny mpiasa ve aho?
Famoronana mailaka hanamarinana ny tsy fisian'ny
Ny lanjan'ny loha-hevitra ao amin'ny mailaka matihanina